Nandritra ny lasa 10 taona, an-tapitrisany efa nokasaiko ny fomba mahasoa dia ny handray ny fiaran-dalamby! Rich saha ny maitso, dranomasina mamirapiratra sy madio mangalahala tendrombohitra vatohara that are never mentioned in travel brochures or blogs. Taking the train is a fun, mety sy ny kitapom-batsy-namana avy amin'ny fomba hahazoana fotoana mba hanondro B A, Tsy mino izany in-droa, handray ny fiaran-dalamby!
Ny zavatra lehibe faharoa momba ny fiaran-dalamby any Eoropa ary amin'ny ankapobeny dia ny fomba firarian'izy ireo amin'ny teti-bola. Tsy vitan'ny no maro be ny levitra toerana azo isafidianana, fa koa fomba maro tsy voatanisa mba hikapa amin'ny ankapobeny saran-dàlana. Koa raha naniry mafy ianao mba namely ny lalamby indraindray tsy ho ela, Ireto misy toro-hevitra lehibe vitsivitsy hampiasa:
Na ianao mpianatra mahay mandeha amin'ny dia na dia lavitra tsy tapaka handray ny lamasinina isan'andro, matory eo amin'ny fiaran-dalamby mety afaka nikapa ny vola lany amin'ny zavatra ilaina eo amin'ny efa ho ny antsasaky. Tena fomba tsy mampino ihany koa mba hamonjy ny fotoana rehefa resin-tory tao amin'ny tanàna iray, ary hifoha hafa. Rehefa avy nilaza fa, zava-dehibe ny mahatakatra ny karazana trano alina fiaran-dalamby.
Fonosana sakafo manokana dia amin'ny alalan'ny lavitra mora indrindra fomba fanaovana ilay izy. Tsy toy ny fitsangatsanganana mahazatra amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka na fiara, rehefa maka fiaran-dalamby raha ny marina dia afaka mihinana aina. Ny ankamaroan'ny seza manana fihoaram--avy latabatra na raikitra latabatra teo anelanelan'ny toerana roa. Na izany aza, raha tsy maintsy hividy ny sakafo ary ny zava-pisotro mandritra ny diany, fa maninona. Ny sakafo eo amin'ny fiaran-dalamby tsy pricey loatra ary matetika no afaka mampihatra ny karatra izay manome fihenam-bidy.
Ento A Train ho Vonjeo-A-Train, mifidy ny toerana sy ny fiaran-dalamby handray ny saika na aiza na aiza tany Eoropa tamin'ny indrindra takatry ny vidiny eny an-tsena! ary, hainao? Rehefa mahazo ny lamasinina tapakila amin'ny Save A Train, Ny famandrihana dingana atao ao anatin'ny 3 minitra, toy izany entana ny kitapo sy mankafy ny zava-drehetra izay manaraka!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/take-train-europe/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#nighttrain #traveleurope fiaran-dalamby Travel torohevitra traveltips